I-Persimmon: ama-kilojoule, izinzuzo nokulimaza emzimbeni womuntu - Persimmon - 2020
I-Persimmon: izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
I-Autumn inikeza izithelo zayo ezizuzisayo ngokukhululekile. Ngalesi sikhathi, sekuyisikhathi sokuthola impela amavithamini - i-persimmon, esiza ukuqinisa amasosha omzimba ebusika. Esikhathini sesigaba sezitshalo, isithelo yi-berry, kodwa ekuphekeni kubizwa ngokuthi izithelo. Ake sizame ukuthola ukuthi yiziphi izakhi ezibalulekile eziqukethwe kwisithelo, yiziphi izinzuzo kanye nokulimala okuletha ukusetshenziswa kwayo.
Kuyini i-persimmon ewusizo
Persimmon ngesikhathi sokukhulelwa
Ukupheka nokudla okunomsoco
Indlela ongakhetha ngayo lapho uthenga
Indlela yokugcina ekhaya
Ikhalori, Amavithamini Namaminerali
Naphezu kokuqukethwe ushukela ophezulu nokudla, i-calsimori yokuqukethwe kwe-persimmon iphansi kakhulu - amagremu angu-100 womkhiqizo, ngokuya ngezinhlobonhlobo, iqukethe 55 kuya ku-70 kcal. I-pulp iqukethe amavithamini A, B, C, PP, kanye namaminerali:
Ziwusizo ngezifo zesisu, zivame ukushintsha umzimba, zisuse ubuthi emzimbeni. I-Persimmon inokuqukethwe okuphezulu kwe-iodine, okuyisivikelo esiwusizo sesifo se-thyroid.
Uyazi? Namuhla, izinhlobo ezingaphezu kuka-700 ze-persimmon zikhula ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba, futhi zonke azidingeki zibe nombala we-orange. Isibonelo, e-savanna yase-Afrika ungabona i-persimmon eluhlaza okwesisindo sobubanzi obufinyelela ku-3 cm. Isikhungo kanye negobolondo le-berry ingaba mnyama: lezi zinhlobo zibizwa ngokuthi "inkosi".
Ukudla izithelo ezivuthiwe kusiza ukulwa nezifo eziningi ngisho nokuvimbela ezinye zazo. Sithola indlela i-persimmon ewusizo ngayo umzimba wesifazane nowesilisa, futhi lokho okuphathayo.
Ukuhunyushwa kusuka ku-Persian "persimmon" kusho "ipulazi yosuku". Ezinye izinhlobo ze-persimmon izithelo ezidliwayo nazo zibizwa ngokuthi "izinsuku zasendle".
Ubulili obuhle buyazisa kakhulu izakhiwo zalo zokuvimbela kanye nekhono lokuthuthukisa inhlalakahle jikelele. Ngakho, i-berry iyasiza:
ngenxa yezinso, ngoba ususa amathele angaphezu kwenyama;
for umbono, njengoba iqukethe vitamin A;
ukuvimbela isifo senhliziyo;
ukugcina isikhumba esisha;
ngehudo, ngenxa yempembelelo yalo.
Abesifazane basuke benqotshwa ngokoqobo yizakhiwo zezitho zomzimba ezithembisa izithelo, ezisiza ukukhula isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, ubulili obuhle buyazisa isithelo sekhono layo eliphakeme lokwanelisa ukulamba kanye nokuqukethwe okuphansi kwekhalori.
Kubalulekile! I-Persimmon - i-preventive enkulu ngokumelene nomdlavuza, ngoba iqukethe i-beta-carotene eningi.
Omunye wemiphumela emibi yomzimba ekudleni amajikijolo - ukwandisa ukusebenza. Izithelo ze-vitamin nazo zizuzisa ubulili obunamandla. Ngakho-ke, ukubuyiselwa okuvamile kokudla ne-persimmon kuqinisa isimiso sezinzwa futhi kwenza izimpawu zotshwala utshwala zibikwe kancane. Kodwa impahla eyigugu kakhulu yesithelo samadoda ukuvimbela i-prostatitis. Uma kungenjalo, i-persimmon iyasiza kakhulu kumzimba wesilisa njengowesifazane.
Abaningi bakhathazekile ngezinzuzo kanye nokulimala kwe-persimmon ngesikhathi sokukhulelwa. Impendulo yalo mbuzo inembile, ngoba iberry linomphumela omuhle kuwo wonke umzimba. Ngesikhathi sokukhulelwa, abesifazane bavame ukucindezeleka nokucindezeleka, okuyinto i-persimmon elwa ngayo. Ibuye isekele ukulinganisela kwezakhi zokulandelela emzimbeni womama ozayo nomntwana, kusiza ekuqedeni okweqile okweqile nokweyingozi emzimbeni.
Ngokuyinhloko, izithelo ziphinde zivuselele izinqolobane ze-iron ne-calcium, eziwusizo ekwakheni isistimu yethambo lezingane. Omama abahlengikazi i-persimmon ayinqatshelwe, kodwa ngobuncane. Kulesi simo, umama kufanele alalele ukunakekelwa kwengane kulesi sithelo, futhi uma kwenzeka ukungezwani, buza udokotela.
Kubalulekile! Ukwengeza ukudla kwezingane ne-persimmon ewusizo kungenzeka uma ingane ifika eminyakeni yobudala. Ochwepheshe batusa futhi baqale ukusebenzisa le-fetus yonke ineminyaka eyishumi kuphela.
I-Persimmon iye yaziqhayisa indawo hhayi kuphela ohlwini lwemikhiqizo enokuqukethwe okuphezulu kwemithi enezivikelo eziqinile, kodwa futhi ekuphekeni, okunomsoco, e-cosmetology nasemithi yokwelapha.
Sekuyisikhathi eside isithelo se-persimmon sihlala isidlo sokuzipheka ekuphekeni. Ukunambitha, iziphuzo ezidakayo (iwayini, i-cider, ubhiya), i-jelly, ne-marmalade zenziwe kusuka kumpulp. Namuhla, ochwepheshe be-culinary bazama ngobuciko, benza izinto ezintsha ezithandekayo ezivumelana nobumnandi bamajikijolo. Isibonelo, amaqatha amajikijolo afafazwa ngejisi lemonti, ehlanganiswe ngepeni leflishi ekhusiwe yenkukhu, enziwe ngamaqabunga e-ulethisi.
Ikholori ephansi kanye nekhono lokwanelisa ukondla ukwenziwa kwendlala eyenziwe nge-persimmon enye yokudla ethandwa kakhulu ekudleni nokudla kwemifino. Amafriji amajikijolo aqukethe i-pectin, elawula isifiso somuntu. Lezi zinto nazo zenza ukwelashwa kwezifo zesisu. Isakhiwo esifanayo se-berry asilimazi i-membrane yamangqamuzana futhi ivikela ukuqoqwa kokudla emgqumeni wokugaya.
Uma isikhumba sishiya ithoni yayo nokubukeka okusha, kuzosiza ukujwayelekile isimo sayo. masks ubuso obuso. Enye yezindlela zokupheka kufanelekile ukulwa nomkhuhlane okhulayo kanye nama-acne futhi kuzoba ukuthanda abesifazane abakhulelwe. Ukuze ulungiselele imaski uzodinga ukuxuba i-pulp ye-berry eyodwa ne-egg yolk eyodwa. Ngemuva kokunamathisela okuqukethwe okutholiwe ezindaweni ezinenkinga ngamaminithi angu-15-20. Inqubo ingenziwa izikhathi ezintathu ngesonto.
Uyazi? Ezweni eziningi zomhlaba, i-persimmon akuyona nje isithelo esiwusizo. Ngokuba amaJapane, uphawu lokunqoba. Ngokuba abantu baseMpumalanga Ephakathi - lokhu kuwuphawu lokuhlakanipha nesiprofetho. Izindabakwane zama-Arabhu zithi ama-geni ahlala ezihlahleni ze-persimmon.
Uma ufaka ijusi lemon ku-pulp yezithelo kanye ne-yolk, uthola imaski enkulu yokuguga. Izithelo nazo zisetshenziselwa ukulwa ne "peel orange". Ukuze wenze lokhu, amajikijolo avuthiwe kanye nekhofi esanda kutholakala enze isikhala. Ingxube eholayo igxiliwe ngokucophelela esikhwameni esinamanzi ngezimpawu ze-cellulite. Inkambo ihlala izinyanga ezintathu nge-massage yokuhlunga 2-3 ngesonto.
Isithelo sisetshenziselwa umuthi wendabuko. Ngokulandela abalandeli bezindlela ezingezona zendabuko zokwelapha, izakhiwo ze-diuretic ususe ama-salts ayingozi emzimbeni akuyona into embi kunemithi. I-100 g fresh amajikijolo ngosuku izokwehlisa ingozi yezifo ezithathelwanayo.
I-Persimmon isiza ukulwa izifo ze-catarrhal. Kwanele ukugeza umphimbo wakho ngesiphuzo kusuka ku-3.5 tbsp. l amanzi afudumele kanye nejusi yesithelo esisodwa kuze kube yilapho elulameka.
Kubalulekile! Khumbula, lezi zokupheka akuyona isiqinisekiso sokuphilisa izifo. Qinisekisa ukuthi uthintana nodokotela.
Nge umfutho wegazi ophezulu Iresiphi elandelayo inconywa. Inyama iphazamisekile ngokufakwa kuka 200 ml ubisi. Yidla izikhathi ezintathu ngesonto.
Nge i-hemorrhoids belulekwa ukuthi balungise isiphuzo elifakwe ngamanzi afudumele kanye no-12 g wezithelo ezomile. Ngemva kokulinda imizuzu engu-10, ingadliwa.
Ibheji elikhethiwe elihle kuphela eliletha injabulo kanye nenzuzo enkulu emzimbeni. Ngakho-ke, ukuze ungaboni ukunambitheka kwezithelo ezingavuthiwe, kubalulekile ukuthi ufunde indlela yokukhetha i-persimmon ngokufanele.
Uma ukhetha, udinga ukunaka izithelo ezivuthiwe kuphelangubani owakwazi ukuba uju namanzi. Izibonakaliso eziyinhloko zokuvuthwa zimibala ekhanyayo ye-orange, ukuthobeka kwesithelo kanye namaqabunga ombala obomvu. Ukuba khona kwamachashazi amnyama kufanele kwaziswe, njengoba lokhu kungabonisa umkhiqizo owonakele.
Funda kabanzi ngezakhiwo ezizuzisayo zezithelo: amakhiwane, ama-kumquat, feijoa, i-longan, i-medlar, i-kivano, i-guava, i-ananas, i-papaya, i-lychee, i-arbutus, i-yoshi, i-goji, i-mulberry, i-chokeberry, i-cherry, i-strawberry, okusajingijolo (omnyama), i-currant (ebomvu, omhlophe, omnyama), iplamu, ipulazi cherry, i-nectarine, i-peach, i-apricot, iphakathi kwe-apula, i-mandarin.
Isihluthulelo sokugcinwa kwezithelo ngempumelelo nokuhlala isikhathi eside kungukunakekela kwabo. Umonakalo omncane kugobolondo we-persimmon udala umonakalo kuwo wonke umntwana. Ngokusho kochwepheshe, indlela engcono kakhulu yokugcina izithelo ingqamuzana, engagcina ukunambitheka nezakhiwo ezizuzisayo zesithelo kuze kube izinyanga eziyisithupha. Ukuqhwaza amahora amaningana kuzosiza futhi ukuqeda ukunambitheka kwe-tart. Umphumela ofanayo uthola uma ushiya isithelo esitsheni ngamanzi afudumele amahora angu-10-12.
Uyazi? I-peach yaseChina, iplamu yabonkulunkulu, i-cherry yasebusika, i-apple yenhliziyo nje nje uhlu olufushane lwamagama e-persimmon emhlabeni. Ekunqunyeni kwalesi berry kuvela e-China, ungakwazi njalo ukubona imbali.
Njengoba sekuphawuliwe, i-persimmon inezakhiwo eziningi eziwusizo, kodwa kanye nazo kukhona ezinye ukuphikisana nokusetshenziswa kwayo, okungukuthi:
isifo sikashukela nokukhuluphala (ngenxa yamaphesenti aphezulu okushukela kalula);
Izithelo eziningi kakhulu ekudleni ziphuca ukuqothulwa, futhi ngokuhamba kwesikhathi - amatshe aqinile (bezoara) kanye nokuvimbela emathunjini;
Ukusetshenziswa okulinganayo kwezithelo ezivuthiwe ze-persimmon kuzozuzisa umzimba wakho. Kodwa uma uzama ukuthola umphumela osheshayo kunengozi yokungatholi okufunayo, futhi uzilimaze ngokwakho.
Amazambane enhle futhi amahle "eSlavyanka": incazelo yokuhlukahluka okumnandi kokukhethwa kwe-Ukraine
Hlangana nezinhlobonhlobo ze rose rose nezithelo ezinkulu
I-Russianfied Spaniard: yikuphi izwe abaqala ukukhula amazambane?